လူလည်ကျပြီး Account တွေ Hack ကြည့်ရအောင်ဗျာ.. ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
လူလည်ကျပြီး Account တွေ Hack ကြည့်ရအောင်ဗျာ..
11:14:00 am Hacking2comments
ဘာရယ်တော့မပာုတ်ပါဘူး English စာတတ်ပေတတ်...
မြန်မာ တစ်ချို့၇ှိပါတယ်.. ရှိတော့လည်း ဒီနည်းလေးနဲ့ စနောက်ကြတာပေ့ါဗျာ..
လွယ်ကူပါတယ်.ရိုးရှင်းပါတယ်.. ဒီနည်းကို ပိာုးအရင်က HF မှာကျွန်တော် ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. ခုမှ ပြန်မျှဝေပေးနိုင်တာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးပေ့ါဗျာ..
http://emkei.cz/ ပြီးရင်တော့ From Name နဲ့From E-mail နေရာ ကို info@facebook.com လို့ ထည့်ပါ..
To ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင်ပို့ ချင်တဲ့သူအကောင့်ကိုထည့်ပါ.. sub နေရာမှာ.. You need to change your facebook password လို့ ထည့်လိုက်ပါ..
Dear (Fb Name),
This is to inform you that we are going to deactivate your account in 15 days because you have not followed our terms and rules while using your Facebook account. We found that your Facebook account is not following our rule 5.A.1 which is listed in our Content Guidelines.
To reactivate your account, please change your password to 12345678. Please keep up your password as 3d8Aj4Fn for at leastaweek so that we can verify your ownership.
လို့ ထည့်လိုက်ပါ.. fb name နေရာမှာ သင် ပာက်ချင်တဲ့အကောင့်နမည်ကိုထည့်ပေ့ါနော်...
ပြီးရင်တော့ Captcha ဆိုတဲ့နေရာမှာ စာသားလေးတွေပေါ်ပါမယ် အဲ့ပေါ်နေတဲ့စာသားလေးတွေကို
သူ့ အောက်ကဘောက်လေးတည်း ပြန်ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်.. အဲ့စာသားလေးပြန်ရိုက်ထည့်ပေးတာ မှားရင် ရမှာမပာုတ်ပါဘူး သေချာလေးကြည့်ထည့်ပါ...
ပြီးရင်တော့ Send ပေ့ါဗျာ..
ဒါဆိုရင်တစ်ဖက်သူ ဆီကို ဖေ့ဘုတ်က ပို့ သလိုလိုဖြစ်သွားပါပြီ.... 1 ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်ပါ.. ပီားးးးးးး ပာိုဘက်ကသူက ယုံစားပြီး သူ့ ပတ်စပေ့ါကို 12345678 ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့..ပိာဟိ သိပြီနော် ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာ...
ကဲ ပျော်၇ွှင်ပါစေဗျာ.. ဇင်ကိုအကောင့်တော့ လုပ်နဲ့နော် သိအောင်လို့ ရှယ်ပေးလိုက်တာပါ
Myat Htet Aung 19 October 2013 at 07:53
အစ်ကိုရေ Error Invalid receivers e-mail address လို့ပေါ်နေတယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
nigia 18 March 2016 at 22:05